Khilaafka Rooble iyo Farmaajo oo sii xoogeystay iyo caqabad hor leh oo doorashada ay la kulmeyso - BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Khilaafka Rooble iyo Farmaajo oo sii xoogeystay iyo caqabad hor leh oo...
Khilaafka Rooble iyo Farmaajo oo sii xoogeystay iyo caqabad hor leh oo doorashada ay la kulmeyso
Waxaa cirka isku sii shareeraya Khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya Farmaajo iyo Rooble xili dalka uu ku jiro jahwareer doorasho, islamarkaana Beesha caalamka soo saareyso baaqyo isdaba-joog ah.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa ajande sare ka dhigtay weerarkii uu Farmaajo kusoo qaaday isagaoo magacaabey gudi shan xubin ka kooban, oo ah wasiiradda isaga aadka ugu dhaw kuwaasoo baaraya wax uu ugu yeeray “isku-day afgembi” oo December 27 la doonayay in lagu inqilaabo xafiiskiisa.
Wasiirka difaaca Abdiqaadir Maxamed Nuur ayaa gudoomiye u ah Gudiga, oo xubnihiisa ay kamid yihiin Wasiirka Amniga C/llaahi Maxamed Nuur oo ah shaqsiga hormoodey dhaq-dhaqaaqyada ka dhanka ah xafiiska Madaxweynaha.
Khilaafka Farmaajo iyo Rooble oo salka ku haya arrimaha doorashadda, ayaa keeni kara in mudo dheer ay qaadato in lagu soo gabagabeeyo doorashadda Baarlamaanka oo soo jiitamaysay tan iyo sanadkii tagey.
Farmaajo xafiiskiisa wali kama uusan jawaabin warqada uu soo saarey Rooble ee gudiga lagu magacaabey, mana la oga in gudigan uu ku guuleysan doono shaqada loo diray oo laga doonayo hal Todobaad inuu kusoo gabagbeeyo.
Xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa sii cakirmeysa, waxaana mar walba furmaya albaab cusub oo khilaaf ah, iyadoo midaas ay caqabad ku noqonayso geedi socodka doorashadda iyo dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya oo 30 sano fowdo iyo nidaam daro kusoo jirtay.